WeCal - မတ်ပြက္ခဒိန် + မိုးလေဝသ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » WeCal - မတ်ပြက္ခဒိန် + မိုးလေဝသ
WeCal - မတ်ပြက္ခဒိန် + မိုးလေဝသ APK ကို
WeCal Ecloud Inc ကို WeCal ကနေလူငယ်တစ်ဦးကပြက္ခဒိန် app ကိုအလှတရားရိုးရှင်းတည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရှင်းလင်း layout ကိုနှင့်အများဆုံးအလိုလိုသိအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ကြောင်းသရုပျဖျောဖြစ်ပါတယ်။ သင်, အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်လည်းသင်သည်အခြားပြက္ခဒိန် app များကိုထဲမှာမမြင်ရစေခြင်းငှါစဉ်းစားဟန်အင်္ဂါရပ်များတစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အနည်းငယ် taps.WeCal အတွက် WeCal နှင့်သင်၏အချိန်ဇယားကိုစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မီရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများ, horoscope ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အလုပ်ချိန်နာရီသတိပေးချက်များ, ကာလသံသရာ။ သငျသညျနှင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်ကိုအမျိုးမျိုးသောပျော်စရာ features တွေ။
ကျွန်တော်ဤမျှလောက်အသုံးပြုသူဦးစားပေးလေးစားအဖြစ်, WeCal အတွက်အရာအားလုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ပြက္ခဒိန်ဘယ်? နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ဘယ်ဆောင်ပုဒ်? ဘယ်အားလပ်ရက်စနစ်အားသုံးစွဲဖို့? အားလုံးသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာ! ထိုကဲ့သို့သောနှိုးဆော်သံဖုန်းမြည်သံအဖြစ်ပင်သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာလည်းဖြစ်ကြသည်။
Android အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့မိမိတို့အကြီးအ tool အဖြစ် WeCal ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ ကျနော်တို့ဒါများများစားစားအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်သင့်ထံမှမည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကြားချင်ကြတယ်။ ကျနော်တို့တသမတ်တည်းအချိန်မီဖက်ရှင်အတွက် WeCal နှင့်လိပ်စာအသုံးပြုသူကိစ္စရပ်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်။ ecloudplay@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
- Transparency widget ကနောက်ကျောကိုယူခဲ့
WeCal - မတ်ပြက္ခဒိန် + မိုးလေဝသ
5.76 ကို MB
ဒီဇင်ဘာ 9, 2016
Ecloud Inc က
OurHome - အိမ်မှုဝေယျာ ...